त्रिशूलीमा खसेको बसमा को को चढेका थिए ? यस्तो छ सबैको नामावली - A complete Nepali news portal based on news & views
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:१८ August 9, 2019 Nonstop Khabar
सर्लाही, २४ साउन । मलङ्गवाबाट ४५ यात्रु लिएर काठमाडौँ जाँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाट नजिक त्रिशूली नदीमा खस्दा अहिलेसम्म तीन जनाको मात्र मत्यु भएको एकिन भएको छ। मृतक तीनै जनाको पहिचान खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
मृत्यु हुनेमा सर्लाही ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–४ का राजनारयाण रौनियार, उनकी श्रीमती शोभा रौनियार, भतिजा सौरव रौनियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सडकबाट सिधै बस त्रिशुली नदीमा गएर डुबेपछि उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परेर घाइते भएका मध्ये १६ को जीवितै उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
ना६ख ७४६९ सृष्टि डिलक्स आज बिहान ३ः३० बजेको समयमा त्रिशूलीमा खसेको थियो । बसमा मलङ्गवाबाट ४०, सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाबाट दुई यात्रु चढेको र बसका तीन कर्मचारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
को को थिए बसमा ? बसमा चढेका यात्रुको नामावली
बसमा सवार हुनेहरूमा विष्णु गाउँपालिकाका खुश रञ्जन, कौडेना गाउँपालिका शिवनगरका मोहम्म मतलुङ, लक्ष्मीपुरका मनिष राय दुई जना, कविलासी नगरपालिका अगर्वाका नवीनकुमार महतो, चक्रघटा गाउँपालिका बेल्हीका राकेश राउत, औरहीका रवि कुमार तीन जना, भारत मुज्जफरपुरका आशिष कुमार दुई जना, मलङ्गवा नगरपालिका गम्हरियाका दिनेश ठाकुर, भारतका पर्सामोडका धीरेन्द्र शर्मा, भारतका अररियाका दिलीप दास तीन जना, ब्रहम्पुुरी गाउँपालिका त्रिभुवनगरका राजनारायण रौनियार चार जना, मलङ्गवाका सञ्जीव चौधरी, अरिवन्द सिंह (वकिल), अनिष राय, भुपेन्द्र कुमार, रोहित शमिम, सुशील श्रीवास्तव, अनिल, मलङ्गवा गणेशियाका भाग्यनारायण महतो तीन जना, भारतका लरकवाका रामबाबु यादव तीन जना, भारतका कुवारीका अजय ठाकुर दुई जना र हरिपुर नगरपालिकाका योगेन्द्र चौधरी, अमित लामा रहेका छन् ।
मलङ्गवा–९ स्थित रहेको सृष्टी बस काउण्टरमा अहिले बसमा सवार यात्रीको आफन्तहरूको भीड लागेको छ ।
त्रिशूली दुर्घटनाः मृतकको सङ्ख्या आठ पुग्यो, २० भन्दा बढी यात्रु अझै वेपत्ता